ဘ၀မှာအမြဲတမ်းပြုံးပျော်နိုင်ကြပါစေ…………………….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘ၀မှာအမြဲတမ်းပြုံးပျော်နိုင်ကြပါစေ……………………..
Posted by nyimalay on Feb 3, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 30 comments
ပိစိကွေးလေးက ပွိုင့်ကိုလုံးဝမမျှော်ပါဘူးဆိုတာအားလုံးကိုသိစေချင်ပါတယ်……………. အခုတလော ပိစိကွေးလေး တင်တဲ့ post တွေတော်တော်လည်းစိပ်သွားပါတယ်……….. နောက်ပြီ သူများတွေပေးထားတာတွေလည်းပါပါတယ်………….. ပိုစ့်ကိုဒီလိုလည်းတစ်ခါမှ အများကြီးမတင်ဘူးပါဘူး…………. ပွိုင့်ကိုသာမျှော်ပြီးတင်နေမယ်ဆိုရင် post တိုင်းကို comment တွေပဲလိုက်ရေးနေမှာပေါ့……….. ပိစိကွေးလေး point ကို မမျှော်လို့ Login မ၀င်တဲ့နေ့တွေတောင်ရှိပါတယ်………. post တွေအများကြီးတင်တယ်ဆိုတာလည်း connection ကလည်းကောင်း….. မတင်စဖူးစတင်တော့ တင်ကောင်ကောင်းနဲ့ ဆက်တိုက်တင်ဖြစ်သွားတာပါ………….. ဒါက Admin ကို ပြောပြထားတာပါ………….. အခု ပိစိကွေးတင်ထားတဲ့အထဲက ဦးခိုင်အနေနဲ့ မကြိုက်တဲ့ Post မတင်သင့်တဲ့ Post လို့ယူဆတာရှိရင် လည်း ဖြုတ်ပြစ်လိုက်လို့ရပါတယ်…… ပွိုင့် တိုးပေးပါ….. ပွိုင့်နှုတ်ပေးပါ ဆိုပြီး ပိစိကွေးဆီကနေ ဘယ်လို Complain မှလာမှာမဟုတ်ပါဘူး……….. ဒီဆိုဒ်မှာ စ၀င်လာကတည်းက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရေးချင်တာရှိရင် ရေးပါတယ် ……… တင်ချင်တာရှိရင်တင်ပါတယ်……… ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မဝေဖန်ခဲ့ဘူးပါဘူး…. ကိုယ့်မူနဲ့ကိုယ်နေခဲ့တာပါ……… လူကိုလည်းမြင်လည်းမမြင်ဘူး….အသံကိုလည်းမကြားဘူးတဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘယ်လိုစိတ်မှမရှိခဲ့တာအမှန်ပါ…….. ခုတလော ပိစိကွေးတင်တဲ့ပိုစ်တွေကို မဖတ်ချင်တဲ့သူ မသိချင်တဲ့သူ မဖတ်နဲ့ မကြည့်နဲ့ပေါ့…….. သူတို့တွေ တင်နေတုန်းကလည်း ပိစိကွေးဘယ်လိုမှမဝေဖန်ခဲ့ပါ…….. အလကားနေရင်း သူများကို ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆို ဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးတွေကြောင့်ပါလိမ့်……… သူများကို မကောင်းပြောရမှစားဝင်အိပ်ပျော်တဲ့အထဲများပါကြသလားလို့တောင်တွေးမိပါတယ်………. လူတိုင်းအပေါ်မှာ မေတ္တာထားပါတယ်……… ကိုယ်ပြုတဲ့ကံကဘယ်သူ့ဆီမှမသွားပါဘူး ကိုယ့်ဆီပဲလာမှာပါ……… ဒီလိုတွေစဉ်းစားမိတော့ တစ်ခုတွေးမိတာရှိပါတယ်……. လူတွေဟာ ကိုယ့်မျက်ချေးတော့ကိုယ်မမြင်ဘူး….. သူများမျက်ချေးတော့ အလွန်မြင်တတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုနားလည်သွားပါတယ်………. သူများတွေကိုတော့အပြစ်တွေပြောနေလိုက်ကြတာ……… ဘယ်လိုလက်ဝါးကြီးအုပ်တယ်……. ဘယ်လိုမတရားတယ်……… ဘယ်လိုလူမဆန်တယ်တွေ ဝေဖန်နေကြတာ………. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောပြန်စဉ်းစားမိကြရဲ့လား ……………..ငါတို့တောင်မှ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ဒီလို ဆိုဒ်လေးတစ်ခုမှာ အရေးပါအရာရောက်တယ်လို့ယူဆပြီး မာန်တွေတက်နေတာ………… ဆိုဒ်ထဲဝင်လာသမျှသူကို ရန်တွေ့ အကောင်းမမြင်ဖြစ်နေတာတွေ……. ဒီလို ကိုယ်ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာတောင်မသိတဲ့ ဆိုဒ်လေးတစ်ခုထဲမှာတောင် ဒီလောက်နေရာယူချင်နေတယ် ……….. သူ့နေရာများရောက်သွားရင် သူ့ထက် အဆ 100 မဆိုးနိုင်ပါဘူးလို့ ဘယ်သူ အာမခံနိုင်ပါသလဲ…………….. ကိုယ်တိုင်ပဲစဉ်းစားကြည့်ကြပါ……………… တကယ်လို့ အဖြေမှန်ကို စဉ်းစားနိုင်တယ်ဆိုရင် တော့ အဲ့ဒီသူဟာ အသိဥာဏ်ရှိသေးလို့ပေါ့……………. မဟုတ်ရင်တော့ ငါတို့ဟာလည်း သူနဲ့ အတူတူပါပဲလားဆိုတာကို သိသွားကြမယ်လို့ ပိစိကွေးလေးထင်ပါတယ်…………….. ဒီဆိုဒ်ထဲကလူတွေမှမဟုတ်ပါဘူး………… အပြင် က လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာဆိုလည်း အများကြီးပါ…………… အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီကသူတွေလေ ပိုဆိုးလေပါပဲ………….နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်………… ကိုယ်သာနေရာကောင်းရချင်ကြပါတယ်…………… ကိုယ့်နေရာကို လည်းဘယ်သူ့မှမပေးချင်တဲ့အပြင် ကိုယ့်လိုနေရာမျိုးကိုသူရောက်လာမှာ စိုးရိမ်ကြပါတယ်………….. ပြီးတော့ပြောကြပါသေးတယ်… ဟိုလူကြီးမကောင်းဘူး ဒီလူကြီးမကောင်းဘူးနဲ့……….. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောအခု သူ့နေရာရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုမစဉ်းစားမိကြဘူး…………… ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း အရမ်းနှိမ်ချင်တာ မြန်တာတွေရဲ့ စရိုက်….ဖေးဖေးမမ မရှိတာလည်းမြန်မာတွေပဲ………… ဒါကစဉ်းစားမိနေတာကြာပါပြီ…………. ဒီပိုစ့်ကို ရေးလိုက်ရင် ဟိုဘက်ကလိုလို ဒီဘက်ကလိုလိုနဲ့ အထင်ခံရမှာတွေကိုတွေးပြီး လူမုန်းမရှာတာပါ…………….. ခက်တော့ခက်ကြသားနော် လူတွေများ………. စဉ်းစားကြည့်ရင် တော်တော်ရီဖို့ကောင်းတယ်……………… ဒီပိုစ်ကိုကြိုက်သလိုဝင်ပြီး comment ရေးနိုင်ကြပါတယ်……….. ဒါပေမယ့် အမှန်တရားဘက်ကတော့ နေပေးရမယ်နော်……… အခုပိစိကွေး ရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ တချို့ အချက်အလက်တွေက ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီနေတယ်ဆိုရင်တော့ပြင်လိုက်ပေါ့…………. အချိန်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်…………လူတိုင်း ကိုယ်ချင်းစာတရားသာထားတတ်ကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ ဘာအတွက်ကြောင့်မှ ၀မ်းနည်းကြရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်………….. သူ့နေရာမှာငါသာဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးလေးရှိစေချင်ပါတယ်………………  ဘ၀မှာအမြဲတမ်းပြုံးပျော်နိုင်ကြပါစေ……………………..
အယ် အယ် ဘာတွေ၊ ဘယ်သူတွေ၊ ဖြစ်လို့လဲ။
အငယ်ဆုံးလေးအမည်ယူထားတော့ ..အကြီးဆုံးကာလသားခေါင်းတွေက ..
သူလိုချင်တဲ့.. ပိုလာဘဲအရုပ်လေး.. ဗာလင်တိုင်းဒေးနေ့မှာ ..လက်ဆောင်ပေးလိုက်…။
အံမယ် .. ဒီကလေး .. ဒီလောက်ကလေး အစခံရတာကို ဒီလောက်ကြီးတောင် စိတ်ဆိုးရတရ်လို. ..
ခေါင်းခေါက်လိုက်ရ … အဟီး။ နာသွားရင် … ညနေကျမှ ဆေးလာလှုးပေးမရ်နော် … လာရင်သောက်ဖို. ကော်ဖီ ကြိုဖျော်ထား .. ဟုတ်လား … ဟီးးး
ဒီဆိုက်ဒ်မှာ အနည်းနဲ.အများတော့ ကိုယ်ဘက်ကလွဲနေရင် အပြောခံ … အစခံရတာချည်းပဲ ..
ကိုယ်တွေလဲ အပြောခံရဖူးတရ် … Dislike တွေအများကြီးရဖူးတရ် … ဒီလိုပဲ ကိုယ်.ကိုကိုယ်ပြင်ရင်း … စရင်းနောက်ရင်း … သူများကိုဝေဖန်ရင်း … သူများဝေဖန်တာကိုခံရင်း … ရွာထဲမှာ ဆက်လက် ပျော်မွေ.နေကြတာပဲ။
အိုခေနော် … စိတ်မဆိုးနဲ.တော့ … ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ. နှလုံးသွေးတွေ အနောက်မခံချင်စမ်းပါနဲ. … ဟုတ်ပီလား ….
*** ကလေးလို.သာပြောရတာ … ငယ်မှန်းမသိ … ကြီးမှန်းမသိ … မှားရင်ခွင့်လွှတ် …
အောင်မငီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ပိစိရယ် ဘာတွေပေါက်ကွဲနေတာလဲ စိတ်နဲ့ နာမည် နဲ့တောင်မကိုက်တော့ဘူး
(..ငါတို့တောင်မှ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ဒီလို ဆိုဒ်လေးတစ်ခုမှာ အရေးပါအရာရောက်တယ်လို့ယူဆပြီး မာန်တွေတက်နေတာ………… ဆိုဒ်ထဲဝင်လာသမျှသူကို ရန်တွေ့ အကောင်းမမြင်ဖြစ်နေတာတွေ……. ဒီလို ကိုယ်ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာတောင်မသိတဲ့ ဆိုဒ်လေးတစ်ခုထဲမှာတောင် ဒီလောက်နေရာယူချင်နေတယ် ……….. သူ့နေရာများရောက်သွားရင် သူ့ထက် အဆ 100 မဆိုးနိုင်ပါဘူးလို့ ဘယ်သူ အာမခံနိုင်ပါသလဲ…………….. ကိုယ်တိုင်ပဲစဉ်းစားကြည့်ကြပါ)
ဘာမဟုတ်တဲ့ဆိုက်တော့မဟုတ်ဘူး ကျနော်တို့တစ်နေ့တာရဲ့ သုံးပုံ နှစ်ပုံလောက်အချိန်ပေးပီးကြည့်ရတဲ့ဆိုက်ပါဗျာ……..
ဆိုက်ထဲဝင်လာသမျှရန်တွေ့ လွှတ်တယ်ဆိုရင် ဒီရွာမှာသဂျီးတစ်ယောက်ထဲ မျက်လုံးလေး လကယ်လကယ်နဲ့ ကြောင်တောင်တောင်လေးဖြစ်နေမှာပေါ့
ပိစိလေး ရွာထဲရောက်တာမကြာသေးဘူးလကွယ် ရွာထဲကသမိုင်းလေးတွေ လေ့လာပါအုံး (၆၀% လောက်ကအပျော်သဘောပါ) ဘယ်သူမှဘာမှ မမျှော်ကိုးပါဘူးကွာ ချစ်လို့ခင်လို့စကြနောက်ကြတာကို စိတ်မဆိုးရဘူးလေ ကလေးရယ်…………
ငါ့ညီမလေး ပေးဆေးကွိ ၊ ပူတူတူလေး ၊ ကလေးလေး
ပျော်လို့ ၀ိုင်းစ ကြတာပါကွာ … ။ သိပ်လည်း feel ဖြစ်မနေပါနဲ့ … ။ ဆိုက်ထဲကနေ ခင်နေကြတာ မျက်နှာလည်း မြင်ရတာ မဟုတ်ပဲ ဒီလိုပဲ သူကစလိုက် ၊ ကိုယ်က စလိုက်ပေါ့ ။ တစ်ခါတစ်လေ မတူညီတဲ့ အတွေးရှိရင်လည်း သူငြင်း၊ ကိုယ်ငြင်းပဲ ။ ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းတယ်မှတ်လဲ ။ etone တို့ဆို အလုပ်လုပ်ချိန် မိုးလင်းကစလို့ ပြန်တဲ့ အချိန်တဲ့ log out မလုပ်ပဲ ကြည့်တာ … အဟီး
ခလေးဆိုတာ စိတ်ညစ်တဲ့ အခါ ငိုတတ်ပေမဲ့ စိတ်ရှင်းတယ်။ ဘာရန်အညိုးအတေး ရန်ညိုးရန်စမှ မထားတတ်ဘူး။
ပိစိကွေးဆိုတော့ ကလေး တယောက် နာမည်နဲ့ တူလို့ ကလေးစိတ်မျိုး မွေးပြီး နေတတ်ပါစေ။
ဘာတွေကို ပေါက်ကွဲနေမှန်း နားမလည်ဘူး …
တို့ရဲ့ကွေးကွေးကို ဘယ်သူတွေက ဘာပြောလို့လဲ ဟင်… ပြောစမ်းပါဦး ကိုကို အင့်ကို၊ ကိုကို အင် ရှင်းပေးမယ်… အဟိ (နောက်တာနော်)
ကိုကို အင် ဆိုတော့.. အင် ဆိုတာ အတုလို့ သိထားပါတယ်။
ညီမငေး ပေးဆေးကွိ သတိထားနော်…
ဘာလာပြောပြော ဘယ်လိုမှစိတ်ထဲမထားပါနဲ့ညီမလေးရယ်..။ ရွာထဲကလူတွေက ချစ်လို့ခင်လို့ စကြ နောက်ကြတာပဲရှိမှာပါ။ ပွိုင့်ဆိုတာကတော့ ဘယ်သူမှ မျှော်လင့်နေလို့ရယ် ဟုတ်ဟန်မတူပါဘူး ။ ပေးမယ်ဆိုလို့ အပျော်သဘော ပြောကြတာဖြစ်မှာပါ။ ပို့စ်တစ်ခုမှ ပွိုင့်80 ပဲရှိတာ။ မရေးရမနေနိုင်လို့ ရေးနေကြတာပါ။ မဖတ်ရမနေနိုင်လို့ ဒီဆိုဒ်ထဲမှာ ၀င်ဖတ်နေကြတာပါ။ နက်ကိုသုံးမှတော့ ဒီဆိုဒ် ဆိုတာ ၀င်သင့်တယ် ထင်လို့ ၀င်ကြည့်နေကြတာပါ။ အော် ကိုခိုင်ရေ….. ကြုံတုန်းပြောရဦးမယ်။ မင်ဘာအသစ်တွေထဲမှာ နေ၀န်းနီ လင့်ပေးလိုက်လို့ ရောက်လာတာတွေရှိတယ်နော်။ နာမယ်ယူတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်သိသလို တစ်ခြားလူတွေကိုလည်း သိစေ့ချင် ဖတ်စေ့ချင် ရေးချင်တာလေးတွေ ရေးစေ့ချင်လို့ပါ။ နေ၀န်းနီ ဆိုတာလဲ ဘာလိုအကောင်ပလောင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်အလုပ်လေးကူသလိုနဲ့ သက်သက်လည်ရာပြန်စားရေးလုပ်နေတဲ့သူပါ။ ကျောင်းတုန်းက စာပိုးလေး ပြန်ကြွလာလို့ ဒီမှာ ၀င်ပြီးရေးလိုက်ပြောလိုက် လုပ်ရင်းပျော်နေမွေ့နေသူလေးပါ။ ဒါကြောင့် အားလုံးကို ရင်းနှီးခင်မင်ချင်ပါတယ်။ ကွေးလေးလည်း စိတ်ကောက်မနေပါနဲ့ ။ နော်
ကလေး သေးသေး ပိစိကွေး
မပေး ပေး ပေး ၊ပေးပေး ပေး
အူယူမလား အသဲယူမလား အူမကြီးယူမလား ချီးခါးယူမလား
နံမယ် အစကလေးဘဲပြော ရပြီ
မှုခင်းသတင်းထဲမှာ လက်သည်မပေါ်သော ရက်စက်သည့် လူသတ်မှုဆိုပြီး ပါမလာရင် စိတ်ကြိုက်ပြော
ပါလာရင်တော့ ထောင်ဝင်စာလာတွေ့ ပေါ့ကွယ်
( အားလုံး ကိုယ့်အကြောင်းတွေနဲ့ ကိုယ်တော့ ရှိကြတာပေါ့လေနော
တစ်ခါတစ်လေကြတော့ ဘယ်သူဘဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်တည်း ပို့ စ်တွေဆက်ပြီးတင်တယ်ဆိုရင် ဆိုလိုတာက
ဥပမာ အခြားနှစ်ယောက် သုံးယောက်လောက် ခြားစီး တင်တော့ ကောင်းတာပေါ့
အခြေနေအရ ဆိုက်က လေးနေတတ်တယ် )
လေးဆို ပေါ့တဲ့နေရာက ဈေးကြီးလို့ ဖြစ်မှာပေါ့
ဒီဆိုက်ပိုင်ရှင်ကလည်း ကလေးတွေ အကြွေးတွေရှိလားတိဝူးလေ
သူတို့ က အမေရိကန်မှာနေတော့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိခိုက်ပါတယ်ဆိုပြီး မတော်နေ တရားလာစွဲနေလို့ 
ရော်ကြေးမရဘဲ အသရေဖျက်မှုနဲ့ ဘအောင်ပု အရက်ကြွေးတွေပါ ဆပ်ခိုင်းလိုက်မယ်
ဘအောင်ပု ဂြိုလ်တုတစ်လုံး ဆောက်ထားခိုင်းတယ်
နွားတင်းဂုတ်နဲ့ မှားပြီး ဆောက်လိုက်လို့ 
နောက်ဆို ဂေဇက်မှာ ပို့ စ်တင်ခြင်ရင်
ရေချိုးခန်းထဲက အော်ပြောလိုက်တာနဲ့ 
ငကွိတော့ ကြောင်ဇတ်ခင်းတဲ့ အထဲ ပါတော့မယ် ထင်တယ်။
ရွာသားတွေရဲ့စိတ်ဓါတ်က အဲဒီမှာ ပေါ်လွင်လာတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ဒီရွာလေးက ချစ်စရာကောင်းနေတာ။ အာလုံးဝိုင်းချော့နေကြတာ ပျော့သင့်ပြီနော် ကွေးလေး။
eros, ဦးခိုင်, အာဖျံကီး, char too , မဆူး , ဦးနီ, ဦးပေါက်, အဘပု နဲ့ ဦးကြောင်ကြီးတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပိစိကွေးလေး ကိုအားပေးလို့။
(သူလိုချင်တဲ့.. ပိုလာဘဲအရုပ်လေး.. ဗာလင်တိုင်းဒေးနေ့မှာ ..လက်ဆောင်ပေးလိုက်…။
နော..။) ဦးခိုင်ကြီးမသိပဲလျှောက်ပြောနေတယ် အဲ့ဒီ အရုပ်က မနှစ်က ဗာလင်တိုင်းဒေးမှာ ပိစိကွေး ချစ်တူကပိစိကွေးကို ချစ်သက်လက်ဆောင်ပေးထားတာပါနော်…. နော်…. နော်…..
ဒီနှစ်လည်းရအုံးမှာပါနော်…. နော်…. နော်……
အန်တီဝေ….. အန်တီဝေက ဘယ်တွေလျှောက်သွားနေမှန်းလဲတိဝူး…. အန်တီဝေမရှိတော့ ပိစိကွေးကို တူတို့ဒွေက ၀ိုင်းအနိုင်ကျင့်ကြဒယ် တိရား……….. တိုင်ပြောတာနော်……. ဆုံးမပေးအုံး…….
ဦးနီနဲ့ နောက်မှစကားပြောအုံးမယ် gtalk မှာ…….. တစ်ခါမှမပြောရသေးဘူးနော်…. ပိစကွေးက အဲ့ဒီလိုအလုပ်ရှုပ်တာ…
အော်အဘပုရယ်….. ရီးဂျားဒေဘာဒေချိဘီးပေါ့…….. ဒီအရွယ်ဘဲရောက်နေဘီ ဟိ …. ဟိ
ဦးကြောင်ကြီးကတော့ သူလက်ဖွဲ့မယ့် ကားသုံးစီးနဲ့ ပြန်အတိုက်ခံချင်လို့နဲ့တူတယ်….. ပိစိကွေး တိုတိုနဲ့ တိုင်ကျောလိုက်မယ်နော် ဟွန်း ဘာမှတ်လည်း………..
ပိစကွေးက E-mail ရယ် gtalk ရယ် ဒီဆိုဒ်ရယ်ပဲသုံးတာ….. ကျန်တာတွေဘာမှမသိဘူး……… အချိန်မရှိလို့….. ခောတ်စားနေတဲ့ facebook ဆိုတာဘာမှန်းတောင်မသိဘူး……. Email က အလုပ်မှာသုံးတယ်….. gtalk က တိုတိုနဲ့ ဂျဂါးကျောဖို့….. ဒီဆိုဒ်ကိုကခင်လို့…. တိပီလား တိကြပီလား………. ဟွန်း ….. သူဒို့ဂဂေါ်မစွံဂျီးဒွေဆိုဒေါ့ တူညာဂိုဘာ ဒီရိုထင်နေဂျဒယ်
အလုပ်နဲနဲရှုပ်နေတာနဲ့ ရွာထဲကို ၀င်ဖို့အချိန်နဲနေလို့ … နောက်ဆို ပုံမှန်ဝင်ကြည့်ပြီး မမြင်မတော်တာတွေ့ရင် ဆုံးမပေးမယ်နော် …
ဂွပ်ထ ဂွပ်ထ နားလည်သွားပြီပေါ့။ ငါတောင်မအားလို့ မန်းပဲမန်းနေရသေးတယ်။ ပိုစ့်တင်ဖို့ ကြိုးစားရမယ်။
ရှောတီး….. ရှောတီး ကိုကိုအင်
နောက်တစ်ခါ ပိစိကွေးကို သူတို့ အနိုင်ကျင့်ရင် ကိုကိုအင့်ကိုတိုင်ပြောမယ်နော်……. စိတ်ချ ကျောင်းတုန်းကတည်းက အတိုင်အတောက ခပ်ထူထူရယ်….
etone နဲ့ မမ ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်….. ခုစိတ်ဆိုးတော့ပါဘူး …….. မူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါပြီ……. ခုမှပဲစိတ်ထဲရှင်းသွားတော့တယ်…….. ဟီး… ဟီး……….
ပေးဆေးကွိရေ … ကွီးလည်းကျန်သေးတယ် ။ ကော်ဖီတိုက်မယ် ပြောထားတယ်လေ… အဟီး … ဒီဆိုက်မှာက စတာ နောက်တာ များပါတယ် ။
အင်ဂျင်နီယာတွေကိုအဲ.လိုတော.မပြောပါနဲ. ကျနော်တို.ဆို အခုမှကျောင်းဆင်းလို.အိမ်မှာမီးချောင်းဆင်တိုင်းအပြောခံနေရတဲ.ကြားထဲမှ ဟီး
ပါပြီးပြီလေ အီးတုံးကလည်း သေချာလည်းဖတ်ဘူး……..
ကော်ဖီတိုက်မယ်ပြောတဲ့သူကျန်နေလို့ ဖြစ်မလား.. ဟုတ်တယ်ဟုတ်..
ရွာထဲကိုမလာတာ သုံးလေးရက်ပဲရှိသေးတယ် ဘာတွေ ပေါက်ကွဲနေပါလိမ့်
ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးလိုက်ပါ ကလေးရာ နော်……….
လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်လိုစိတ်နဲ့ လူတွေ အမြဲတမ်းကြီး ဘယ်ရှိနေနိုင်မှာလဲ…
နားလည်ပေးလိုက်ရင် ရင်ထဲမှာ အေးချမ်းပါတယ် ညီမလေးရ
ဘာမှမဖြစ်နဲ့ ပန်းသီးဝယ်ကျွေးမယ်နော်… မနော နေမကောင်းလို့ မလာဖြစ်တာနဲ့ ရွာထဲ ကလေးကို ဘယ်သူတွေ ဘာတွေပြောလဲ ပြော မမကို ပြောတဲ့သူ ရိုက်ခံရမယ်လို့နော့…….
ှုဦးနေ၀န်းနီက အကောင်ပလောင်ဆို လေးခွနဲ့ ပစ်ဖို့ စောင့်နေတာ အဟိ:P
ဟုတ်ပါ့… အိမ်နားမှာ ဘာကောင်မှ အသံမကြားစေရဘူး။ လေးခွ မရှိရင် ရှိတာနဲ့ကောက်ပစ်လိုက်တာပဲ အရင်က အက်ဒါ လည်းလာခဲ့ ကော်ပရာလဲလာခဲ့ပဲ ကြောင်တို့ဘာတို့ဆို ရေနွေးပူထဲ တန်းထည့်တာ။ ခုမှ စိတ်လျော့ထားလို့ တိရား………..ခုလောလောဆယ်တော့ အားသေးဝူး ။ ပို့ စ် တင်ဖို့ အရှည်ကြီး ရယ်မှ တစ်ကျပ်ဖိုးရေးနေတာ မပြီးနိုင်သေးဘူး။ ဈေးထဲက အလုပ်သမလေး အကြောင်း ဈေးပုံပြင်တဲ့…. (ဟီးး ကြိုတင် ကြော်ညာ ၀င်ရတာ… ကွန်မန်း တစ်ခုမှမရှိရင် ပွိုင့် ပြန်နှုတ်မယ်ဆိုလို့) ကိုယ့် ပိုစ့်တွေက တစ်မဲမှ မရလိုက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ အများကြီးရယ်
ပိုစ်မှာ ကွန်မန်း မရရင် သူများ မပေးလည်း ကိုယ့်ဟာကို ပေးလိုက်ပေါ့။ ဘာခက်တာ မှတ်လို့.. လေးခွ နဲ့ ပစ်တာ အကြောင်း မဟုတ်ဘူး စိတ်တိုတိုနဲ့ ပစ်ချင်ဇောနဲ့ ခွေးကန် ကြောင် ထိ ဖြစ်နေအုန်းမယ် သတိတော့ထားပေါ့။
ပိစိကွေး ဦးနီကို ဘယ်သူမှအားမပေးချင်နေ…
်ဟေ့ ဟေ့ ….. ပိစိနဲ.အီးတုံး
ကော်ဖီတိုက်၇မှာက ပိစိဘက်ကတိုက်၇မှာ … ဟီးးး
ပိစိေ၇ … ကွီးကိုတော့ ကော်ဖီဆို၇င် အိုကေပီ …
အီတုံးတော့ ၀ီစကီပဲဝယ်တိုက်လိုက် … ဟီးးး
ဟုတ်တယ်…. ဟုတ်တယ်…. ကွီးကိုကော်ဖီတိုက်မှာ…
အီးတုံး ကိုတော့ ၀ီစကီတိုက်မယ်နော် ……..
အီးတုံးပဲပြောတယ်လေ ကျော်ဟိန်းလေသံနဲ့ နာကြိုက်လို့ကွာ တဲ့….